Ny Mondialy Antserasera: Ny Bilaogin’I Lionel Messi Sa Blognovela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2017 3:55 GMT
Sabatra roa lela ny tranonkala manana endrika tsy fantatra anarana . Etsy andaniny, mianatra mora foana ny famahanana bilaogy tsy mitonona anarana ary maneho ny tenany ho tsy manantahotra fa ho tratran'ny valy bontana ireo olom-pirenena izay miaina isan'andro ny fangejan'ny governemanta. Etsy ankilany, sarotra mba tsy ilazana hoe tsy azo atao angaha ny manamarina ny tena mari-panondroana ny mpanoratra ao amin'ny bilaogy atolotra iray. Tsy midika anefa izany fa tsy manandrana manao izany ny olona. Nanazava ny adihevitra manodidina ny tranonkalan'ny bilaogy iray izay nosokajiana ho nosoratan'ilay tanora malaza amin'ny baolina kitra Arzantina, Lionel Messi (ES) ilay mpampianatra fampitam-baovao Ekoadaoreana, Christian Espinosa .
Na tena izy na tsia ity bilaogin'i Lionel Messi ity, dia azo lazaina fa olona maherin'ny 250 no maneho hevitra ao amin'ilay lahatsoratra izay lazaina fa an'ilay mpilalao baolina kitra malaza any Arzantina izay fanta-daza ho iray amin'ireo tanora mpilalao manerantany mahavelom-panantenana lehibe indrindra ( vao haingana izy no nandray 19 taona).
Tiako ny mamaky ny fomba fiezahan'ny olona ahafantatra raha toa ka tena i Messi tokoa na tsia izy ity , nohamarinina ny fahasamihafan'ora misy teo amin'i Arzantina sy Alemaina, ny fahadisoan-tsipelina (ny fitiavana sy ny fankahalana manoloana ny lahatsoratra vaovao nampiasaina tao amin'ny hafatra dia tsara hanaovana fanadihadiana), ary fanehoan-kevitra hafa izay tsy mampino.
Na iza na iza izy, manohy mamoaka lahatsoratra avy any Alemaina manana mpanjohy an-jatony mamaky izany isan'andro ity olona ity, ary manao izany ho andian-tantara mahaliana tahaka ny tena izy.
Bilaogy sa Blognovela?
Blog de Lio no anaran'ity bilaogin'i Lionel Messi na ilay mpisoloky ny anarany ity
Ireto misy sasantsasany amin'ireo sokajin-dahatsoratra navoakany ary azonao atao ny manao ny fehin-kevitrao manokana …
Ankehitriny tsaroako izany tao Shily , nisy zavatra nitranga toy izany tamin'ny bilaogy izay noforonin'ny filoha teo aloha, Ricardo Lagos ary ireo izay niahiahy raha tena bilaoginy tokoa izany . Angamba nisy boky mihitsy aza momba izany. Na inona na inona anefa, nanjary fomba iray hiresahana ireo olo-malaza ny fampitam-baovao amin'ny alàlan'ny bilaogy .